भूकम्प जाँदाजाँदै यस्तो भएको थियो सगरमाथा (हेर्नुस् भिडियो)
गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँगको चर्चित अन्तर्वार्ता
भूकम्प जाँदाजाँदै यसरी ढलेको थियो वसन्तुपर क्षेत्र, हेर्नुस् लाइभ भिडियो
काठमाडौँ, १५ वैशाख । शनिबार काठमाडौँमा गएको महाभूकम्पले हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ । बाँचेकाहरु पनि शोक र पीडामा छन् । नेपाल घुम्न आएका एकजना पर्यटकले भूकम्प गइरहेको बेलाको लाइभ भिडियो खिचेका छन् । काठमाडौँको...
नेपाली मोडलको विकनीमा हट फोटोसूट (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौँ, ३ बैशाख । नेपाली राजनीतिका जिउँदा इतिहास सूर्यबहादुर थापाको निधनले यतिबेला सिंगो देश शोकमा डुबेको छ । धनकुटाको मुगा गाउँदेखि सिंहदरबारको कुर्सी सम्हाल्दासम्म उहाँका जीवनमा विभिन्न अविष्मरणीय क्षणहरु छन् । हक्की स्वभावका थापाले...
दक्षिण कोरियामा नेपाली मानवीय संवेदना पोख्दै युवा चित्रकार (हेर्नुस् भिडियो)
त्यसै आक्रमण हुन्न ज्योति मगरमाथि, हेर्नुस् उनको उत्तेजक प्रस्तुति
काठमाडौँ । केही दिन अघि गायिका तथा मोडल ज्योति मगरमाथि यूएईको आबुधाबीमा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुर्व्यवहार भएको खबर सार्वजनिक भयो । त्यहाँ होहल्ला र दुर्व्यवहार भएपछि प्रहरीले केही युवालाई पक्राउ समेत गरेको...
आलिया भाटले यसरी घटाइन् ३ महिनामा १६ किलो (हेर्नुस् भिडियो)
बलिउडकी कान्छी अभिनेत्री आलिया भाटले एकाएक १६ किलो तौल घटाइन् । उनको पहिलो फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द ईयर’ फिल्ममा अभिनय गर्नका लागि उनले ३ महिनामा १६ केजी तौल घटाएकी थिइन् । फिल्म क्षेत्रमा आउनु...
दंगै पार्ने, लठ्ठै पार्ने स्वरका धनी अछाम साफेबगरका निरज बिक
सुत्दा घुर्ने समस्या छ ? घरमै गर्न सकिन्छ उपचार, हेर्नुस् रामदेवको टिप्स !
यौनशक्ति बढाउन यस्तो योगा गर्नुहोस् (हेर्नुस भिडियों)
घरमै बसेर तौल घटाउन सकिने सजिलो उपायहरु (हेर्नुहोस् भिडियो)